Fa inona izany MEDITIC izany e?
MEDITIC :: TONGASOA :: L'association MEDITIC
mahefaserge le Mar 23 Déc - 0:41
Ny fikambanana MEDITIC dia vondrona mpianatra mikaroka hevitra mba hanamorana ny fianarana lesona "MEDECINE". Maro ny fomba mety anatanterahana izany, fa ny fikambanana dia nifidy manokana ny TIC (na ny teknolojia vaovaon'ny serasera sy ny fahalalàna).
Midadasika nefa ny taranja ka nosafidian'ny fikambanana ho fomba fiasa ny famaliana ny hetahetan'ny mpianatra. Izany hoe ny mpianatra no mangataka na misafidy izay fomba ianarany, ka miainga amin'ireo ny lahasa rehetra hatao.
Ohatra mivaingana hitanao ny namoronana ireto tranonkala fifanakalozana ireto:
ameditic.blogspot.com (ahafantaranao bebe kokoa ny momba ny fikambanana sy ny hevitra voiziny)
meditic.purforum.com (ifaneraseranao mivantana amin'ny namanao mpianatra)
Soso-kevitra fotsiny ireo ahazoan'ny besinimaro ny fomba fiasa, fa araka ny voalaza dia anjaranao no misafidy izay tianao ho azo sy ny endrika ("format") ilanao azy.
Mazotoa àry dia manasa anao ho mpikambana e!